Maxaad kala socotaa ujeedada safarka Madaxwaynaha Soomaaliya ee dalka Uganda? + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka Maxaad kala socotaa ujeedada safarka Madaxwaynaha Soomaaliya ee dalka Uganda? + Sawirro
Maxaad kala socotaa ujeedada safarka Madaxwaynaha Soomaaliya ee dalka Uganda? + Sawirro
(Kampala) 12 Maarso 2019 – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xalay gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Previous articleBoeing oo xaalku ku xun yahay & saamigeeda oo hoos u dhicii ugu xumaa sameeyay muddo 18 sano ah + Sawirro
Next articleFaahfaahin u saabsan weerar cir iyo dhul ah oo ka dhacay deegeen ururka Al-Shabaab gacanta ku hayaan